စက်မှုဝန်ကြီးဌာန တစ်နေ့တန်(၅ဝဝဝ)ကျ ဘိလပ်မြေစက်ရုံဖွင့် | Myanmar Industry Portal
» စက်မှုဝန်ကြီးဌာန တစ်နေ့တန်(၅ဝဝဝ)ကျ ဘိလပ်မြေစက်ရုံဖွင့်
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန တစ်နေ့တန်(၅ဝဝဝ)ကျ ဘိလပ်မြေစက်ရုံဖွင့်
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုသည် ဇွန် ၂၈ ရက် နံနက်ပိုင်းက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ဆည်စက်မှုနယ်မြေရှိ အမှတ်(၃၃) အကြီးစားစက်ရုံ(ကျောက်ဆည်)၌ ကျင်းပသည့် အမှတ်(၂) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် Myanmar Conch Cement Co.,Ltd. တို့ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် တစ်နေ့တန် (၅ဝဝဝ)ကျ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ စက်မှုကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍလျှော့ချပြီး ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများကို ငှားရမ်းခြင်း(Lease)၊ ဖက်စပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း(JV) တို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှချမှတ်ထားသည့် စက်မှုကဏ္ဍဆိုင်ရာမူဝါဒတွင် ''စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် ပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍ၊ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကဏ္ဍပိုမိုမြှင့်တင်ရေး'' ဆိုသည့် မူဝါဒတစ်ရပ်လည်း ပါဝင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အမှတ်(၂) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ဘိလပ်မြေစက်ရုံများအား ပုဂ္ဂလိကနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်အတွက် ရေရှည်အကျိုးပြုနိုင်မည့် အခြေအနေ၊ နည်းပညာသုံးစွဲမှုနှင့် နည်းပညာလက်ခံရရှိနိုင်မှုအခြေအနေ၊ ဝန်ကြီးဌာနအတွက် အကျိုးအမြတ် ရရှိနိုင်မှုအခြေအနေ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မထိခိုက်စေရန် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးနိုင်မှုအခြေအနေ၊ Partner ၏ ရေရှည်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေ စသည့်မဟာဗျူဟာ(၇) ရပ်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှုလျော့နည်းလာစေရေးနှင့်တစ်ဖက်ကလည်း စက်မှုအခန်းကဏ္ဍတွင် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ ပိုမိုတိုးတက်ပါဝင် လာနိုင်စေရေးအတွက် နိုင်ငံတော်၏တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကြီးများနှင့် ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးများအတွက် လိုအပ်နေသည့် ဘိလပ်မြေအား ပိုမိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် တစ်နေ့တန်(၅ဝဝဝ)ကျ ဘိလပ်မြေစက်ရုံကို အမှတ်(၂) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် Myanmar Conch Cement Co.,Ltd. တို့ B.O.T စနစ်ဖြင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုဖွင့်လှစ်သည့် တန်(၅ဝဝဝ) ကို ဘိလပ်မြေစက်ရုံသည် အမှန်တကယ်စက်စွမ်းအားအရ တစ်ရက်လျှင် ဘိလပ်မြေတန် (၅၅ဝဝ) ဝန်းကျင်အထိထုတ်လုပ်နိုင်သည့် စက်ရုံဖြစ်ပါကြောင်း၊ တစ်နေ့တန်(၅ဝဝဝ)ကျ ဘိလပ်မြေစက်ရုံကို မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီ တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်မှစပြီး စီးပွားဖြစ်စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ဘိလပ်မြေတံဆိပ်အနေဖြင့် မူလမြင်းခေါင်းတံဆိပ်နှင့် ALPHA တံဆိပ်အသစ်တို့ကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိသွားမှာဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ကောင်စစ်ဝန် Ms. Yang Sheng ၊ အမှတ်(၂) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာစိုးနိုင်၊ Myint Investment Group Co., Ltd. မှဦးကျော်မိုးနိုင်နှင့် China Chonch Group Co., Ltd.မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Wang Gian Chao တို့က စက်ရုံကို ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြပြီး မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။
ယင်းနောက် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ကောင်စစ်ဝန် Mr. Wang Yu ၊ Myint Investment Group Co., Ltd. ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မြင့်၊ China Conch Group Co., Ltd. မှ Mr. Gao Deng Bang တို့က ကမ္ပည်းမော်ကွန်းကို စက်ခလုတ်နှိပ်ဖွင့်လှစ်ပေးကာ အမွှေးနံ့သာရည်ဖြင့် ပက်ဖျန်းကြပြီး စက်ရုံအတွင်း ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်မှု အဆင့်ဆင့်ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြသည်။
တစ်နေ့တန် (၅ဝဝဝ) ကျဘိလပ်မြေစက်ရုံကို Myanmar Conch Cement Co., Ltd. နှင့်၂ဝ၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ စက်ရုံမှ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် ဘိလပ်မြေ တစ်ရက်တန် (၅ဝဝဝ)နှင့် စွန့်ပစ်အပူမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 48 MW ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး စက်ရုံမှ 33 MW ပြန်လည်သုံးစွဲမည်ဖြစ်၍ မဟာဓာတ်အားလိုင်းသို့ 15MW ပို့လွှတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ပြည်တွင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်လိုအပ်သော အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် ဘိလပ်မြေများထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်၍ ပြည်ပသွင်းကုန်အစားထိုး ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Source: MOI Web Portal
Photo: HIE 2